Tababar lagu baranayay maamul wanaagga oo lagu qabtay Muqdisho (Sawirro) – Radio Muqdisho
Tababar lagu baranayay maamul wanaaga iyo hanaanka doorashooyinka ayaa lagu soo geagebeeyay Muqdisho.
Munaasabaadaan oo lagu soo xirayay tababar muddo 24 cisho ah uga soconayay magaalada Muqdisho 164 qof oo isugu jiray shaqaalaha dowlada Hoose ee Xamar iyo maamullada degmooyinka Gobolka Benaadir, ayna ka qeyb galeen mas’uuliyiin uu ka mid yahay sii hayaha Wasiirka Arrimaha gudaha iyo federaalka ee Soomaaliya, mas’uuliyin ka tirsan maamulka Gobolka Benaadir iyo qeybaha bulshada ayaa xalay lagu qabtay xarunta degmada C/casiis ee magaalada Muqdisho.
Tababarkan oo ay iska kaashanayeen Maamulka Gobolka Benaadir iyo Machadka daraasaadka siyaasadda ee Heritage ayaa waxa lagu baranayay tababarkaasi dowlad wanaagga iyo hanaanka doorashooyinka dowladaha hoose, waxaana munaasabadaasi mudaddii ay socotay suugaan ka turjumeysa waxqabadka maamulka Gobolka Benaadir ku soo bandhigeen kooxo faniin ah oo ka dhisan caasimadda.
Guddoomiyaha degmada C/casiis Cismaan Muxidiin Cali Cariif oo ugu horeyn munaasabadda ka hadlay ayaa sheegay in uu aad ugu faraxsanyahay in munaasabad ceyn kaan oo kale lagu qabto xarunta Degmada.
Guddoomiyaha gobolka Benaadir mudane Xasan Maxamed Xuseen “Muungaab” oo isna ka hadlay xafladda ayaa uga mahadceliyay hay’adaha ka qeyb qaatay fududeynta tababarka, isagoo xusay in maamulka Gobolka Benaadir uu sii wadi doonaan tababarada nuucaani oo kale ah.
Mudane Cabdullaahi Goodax Barre Siihayaha Wasiirka Arrimaha Gudaha iyo Federaalka ee Soomaaliya oo soo xiray tababarka ayaa kula dar daarmay in ka qeyb galayaashii tababarkaas in waxyaabihii ay ka barteen ay bulshada ugu adeegaan, isagoo xusay in arrintani ay qeyb ka tahay hirgelinta Nidaamka Federaalka.
Tababarkan ayaa qeyb ka ah dadaalada uu Maamulka Gobolka Benaadir ugu jiro hirgelinta doorashooyinka dowladaha Hoose ee Xamar.